Divers Archive | NewsMada | Page 430
Haintrano tany Ambilobe : nanome fanampiana 2 t ny masoivoho indianina
Par Taratra sur 06/09/2016 Divers, NS Malagasy
Nanome vary, confiture, dite, ronono, menaka, fitaovana fampiasa an-dakozia, fanafody fototra ho an’ireo traboina vokatry ny haintrano tao Ambilobe ny fanjakana indianina tamin’ny alalan’ilay sambo izay miantsona ao Antsiranana. Sambo mpiady Trikand ny anarany izay tonga tao an-toerana ny faran’ny volana teo, naharitra hatramin’ny asabotsy teo ny fiantsonana tao amin’ny seranan-tsambo. Voalaza fa 5 000 ny […]
Antohomadinika sy Tsiroanomandidy : nitondrana fanampiana ireo may trano
Nahatratra 64 ireo tsy manan-kialofana vokatry ny haintrano tetsy Antohomadinika IIIG Hangar ny alahady alina teo. Nidina ifotony teny an-toerana ny minisiteran’ny mponina nisolo-tena ny fitondram-panjakana nitondra izay voatsirambin’ny tanana hamonjena ireo mponina. Notombanana tamin’izany ny fahavoazana hahafahana mitondra vahaolana maharitra ho an’ireo tra-pahavoazana sy manohana azy ireo ara-tsaina. Tsiahivina ihany koa fa nisy ny […]
CAM : Bushido 1 a été couronné de succès
La première édition de la grande rencontre entre les passionnés d’arts martiaux baptisé « Bushido 1 » a fait grand bruit au palais des Sports de Mahamasina samedi dernier avec la participation d’ experts étrangers dans plusieurs disciplines. Le public est venu en liesse pour profiter de cet évènement d’autant plus que l’entrée était gratuite pour un […]
Fanamboaran-dalana ao Ivato : mampitriatra trano ny hamafin’ny fitaovana
Par Taratra sur 05/09/2016 Divers, NS Malagasy
Velon-taraina ireo tokantrano maromaro ao amin’ny kartie faharoa ao amin’ny kaominina Ivato amin’ny afitsoky ny tanjaky ny fitaovana ampiasain’ireo Sinoa mpanamboatra lalana ao an-toerana. Mahery vaika ireo karazana fitaovana famakiana vato ampiasaina ka miteraka hovitrovitra mafy ary mampitriatra ny tranon’ny manodidina. Manginy fotsiny ny firodorodon’ny kamiao andro aman’alina mitatitra tany. Eo koa ny vovoka mitorajoro […]
Nitsidika tany atsimon’ny Nosy ny tale jeneralin’ny FAO, misahana ny fanjarian-tsakafo sy ny fambolena sy fiompiana, José Graziano da Silva ny faran’ny herinandro teo. Nolazainy tamin’ny radio RFI ny hafatra manaitra ny sain’ny rehetra fa tena mampanahy tanteraka ny fisehon’ny kere sy tsy fanjarian-tsakafo any atsimon’i Madagasikara. “Mila vahaolana haingana isika satria maherin’ny 6 hetsy […]
Hitsy toraka : rehefa matotra dia…
Anisan’ny vokatra mahafaly ny Malagasy rehetra ny nandray azy, ny fahazoan’i Madagasikara ny laharana fahadimy, tamin’ny fiadiana ny «Afrobasket women U18». Fihaonana, nifarana omaly tany Egypta. Afaka mirehareha fa anisan’ireo efa manana ny toerany eto Afrika, ary tsy azo tsinontsinoavina, ny tovovavy Malagasy. Rehefa matotra ny fanomanana, ka tsara ny fikarakarana, tonga ho azy ny […]
Fitrandrahana volamena : mitohy ny fanoherana ny Sinoa
Mitohy ny fanoheran’ny mponina any amin’ny faritra hafa ny fitrandrahana volamena ataon’ny Sinoa. Ankoatra ny any Soamahamanina, misy koa ny any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany, ary manomboka manangon-tsonia koa izao ny ao an-tanànan’Andonaka, distrikan’Ambalavao, manohitra ny fahatongavan’ny Sinoa. Misy milaza fa tsy mbola misy Sinoa tonga any fa feo fotsiny aloha ny mandeha izao. Marihina […]
Mihetsiketsika ireo mpanao politika
Mipoitra avokoa ny vondrona na vovonana politika izao tato ho ato. Mitaky ny hirosoana amin’ny fifidianana mialoha ny fotoana izy ireo. Anisan’ny antony ivoizan’izy ireo izany ny tsy fandriampahalemana, ny kolikoly, ny fanamparam-pahefana, ny fahantrana. Fa eo koa ny momba ilay lalàn’ny fifandraisana… Mazava ny valin-kafatry ny mpitondra sy ireo mpiandany aminy ny tokony hiandrasana […]
Ankoatra ny halatra lakolosy… : misy antokom-pivavahana manarama olona mividy Baiboly
Malaza izaitsizy ao Moramanga amin’izao fotoana izao ny fisian’ireo antokom-pivavahana manao fitadiavana asa amin’ny alalan’ny peta-drindrina hoe : “mitady mpiasa tsy mila diplaoma”. Fantatra fa mitaona olona sady manarama 120 000 Ar isam-bolana ity antokom-pinoana iray ity ho an’izay tonga hivavaka ary vonona ny hianatra sy hanaraka ny foto-pinoan’izy ireo. Tsy vitan’izay fa midina mitety tanàna […]
La 3è édition du festival «Nosy Be Symphonies», a débuté, mardi dernier, à Nosy Be et ce, jusqu’à ce soir. A ce sujet, il a obtenu cette année le titre honorable de l’«Evènement officiel des Iles vanilles». A l’initiative du Comité d’organisation d’activités culturelles (COAC), Nosy Be Symphonies a su au fil des ans asseoir […]
Izy m’tsam : un premier DVD, après 5 ans d’existence
Le fameux couple Doudou et Pounie de l’émission télévisée «Izy M’Tsam» célèbre cette année ses 5 années d’existence. Pour marquer l’évènement, il sort son premier DVD qui sera présenté officiellement au grand public, ce jour, au centre commercial Akoor Digue. Sur ce, il invite douze artistes, entre autres Rak Roots, Arione Joy, Alson, Joilambups, Mélanie […]
Toamasina : progrès des écoles coraniques
Un élève du «Madrassa Anoor Wal Wudah» d’Ankirihiry a reçu une moto des mains du Cheick Idriss, en récompense de ses meilleures prestations dans la récitation des versets complets du Coran lors de la sortie de la 10ème promotion des étudiants de cette école coranique d’Ankirihiry à Toamasina. Cette école (madrassa) dispense des cours de […]
Cancer-enfants : le traitement pose problème
Environ 1% des personnes atteintes du cancer à Madagascar sont des enfants. Ce taux est encore très faible mais malgré tout, l’insuffisance d’équipements médicaux pour le traitement est préoccupante pour la plupart des parents. Hantamalala Rafanomezantsoa, mère de Tsilavina Natacha Rakotoarisoa, une jeune fille de 16 ans atteinte de la leucémie ou cancer du sang, […]
« Salon des jeux de société » : nahasarika ny ankizy ny lalao vaovao
Par Taratra sur 03/09/2016 Divers, NS Malagasy
Anisan’ireo hetsika fanao, etsy amin’ny Alliance française (AFT) etsy Andavamamba, isaky ny fotoam-pialan-tsasatra ny “Salon des jeux de société”. Notontosaina tamin’iny fiandohan’ny volana aogositra iny, ny andiany faha-21. Toy ny isan-taona, mihatsara hatrany ny vokatra. Anisan’ny nampiavaka, ity andiany ity, ny fampidirana lalao vaovao, ny « jeu de cartes japonais ». Marobe ireo liana tamin’izany ka nianatra […]
Tsipy kanetibe : hisy fampianarana maimaimpoana ireo ankizy
Ho fampiroboroboana ny taranja tsipy kanetibe eto Analamanga, hisy fampianarana ireo ankizy 6 ka hatramin’ny 15 taona, homen’ireo teknisianina ao anatin’ny fikambanana Toerana entina mampivoatra ny maha olona na ny (Team). Manomboka anio sabotsy, amin’ny 9 ora no hanaovana izany, etsy amin’ny kianja CBT Mahamasina. Nambaran’ny tomponandraikitra fa ho maimaimpoana izany, fanomezana fahalalana izany fa […]
Fanitaran-tsaina : tsy milalao ny zaza malagasy
Afaka andro vitsy, hiditra hianatra ny mpianatra. Tapitra ny fialantsasatra lehibe. Vanim-potoana nahatarafana fa tsy milalao ny zaza malagasy, raha ny zava-nisy teto an-dRenivohitra sy ny manodidina. Saika nihiboka an-trano ny ankamaroan’ireo izay tsy afa-nivoaka ny faritra nisy azy. Trano izay nataon’ny Malagasy ho fonenana fa tsy ilalovana. Tsy nitombo isa firy ireo ankizy nilalao […]
Me Ralalasoa Irène : “Miainga amin’ny mpitondra ny ady”
“Tsy maintsy miainga amin’ny mpitondra fanjakana voalohany indrindra ny ady amin’ny kolikoly. Ohatra raisina sy jeren’ny olona rehetra ery ambony ery izy hoe: manao ahoana izao mpitondra anay izao?”, hoy ny mpikamban’ny Komity ho amin’ny fitandroana ny fahitsiana (CSI), ny Me Raharimalala Irène, teny Andrainarivo, afakomaly. Raha manaja ny lalàna ny mpitondra, mahay ny lalàna […]
Fandrobana orinasa : karohina ny jeneraly iray
Manomboka miseho masoandro ny tohin’ny krizin’ny taona 2009. Nambaran’ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny orinasa Tiko fa karohina ? amin’izao fotoana izao ny jeneraly iray, nitantana ireo fiaran’ny orinasa. Voalaza fa niainga avy amin’io jeneraly io ny fahaverezan’ireo kamiao ireo. Na izany aza, efa niverina tsikelikely ny sasany amin’ireo kamiaon’ity orinasa ity rehefa nanaovana antso avo. « 14 […]
Synodan’ny FLM any Antsirabe : manahy hosoka amin’ny fifidianana ny kristianina sasany
Mitaky fanazavana, dieny ety am-piandohan’ny Synoda. Nahatonga fanambarana ny mpino sasany eo anivon’ny Fiangonana loteranina (FLM) ary naneho ny ahiahiny manoloana ny fifidianana eo anivon’ity fiangonana ity. “Atao voalohany hatrany ny fifidianana ny birao ary mitarika ny fifidianana manaraka rehetra ny lany eo avy eo. Anisan’izany ny fifidianana ny mpikamban’ny Komity maharitry ny synoda lehibe […]
« Précédent 1 … 428 429 430 431 432 … 554 Suivant »